पूर्वसभामुख महराले उच्च अदालतबाट पनि पाए स’फाइ:: Mero Desh
पूर्वसभामुख महराले उच्च अदालतबाट पनि पाए स’फाइ
Published on: १२ श्रावण २०७८, मंगलवार १०:०४
१२ साउन, काठमाडौं । पूर्वसभामुख कृष्ण बहादुर महराले बलात्कारसम्बन्धी मु’द्दामा उच्च अदा’लत पाटनबाट पनि स’फाइ पाएका छन् ।
मंगलबार न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदी को इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलालाई नै सदर गरेको उच्च अदालत पाटनकी प्रवक्ता अमृताकु मारी शर्माले जानकारी दिइन् ।पूर्वसभामुख महरामाथि संसद सचिवालयकी एक कर्मचारीले ब`ला’त्कार गरेको आ´रोप लगाएकी थिइन् ।
सोही आरोपका कारण महराले सभामुख पदबाट राजी नामा दि’नुपरेको थियो ।तर पीडित महिलाले नै जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएर महराले ब´ला’त्कार नगरेको वयान दिएकी थिइन् । त्यसपछि जिल्ला अदा´लतले ब’ला´त्कारको दावीमा प्रमाण नपुग्ने भनी सफाइ दिएको थियो ।
यो पनि,,माधव नेपालमाथि खनिईन् सांसद चौधरी, एउटा बराबर हैसियतको सांसदलाई निस्केर जा भन्ने ?
काठमाडौं, १२ साउन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) की सांसद गंगा चौधरीले माधव नेपालले प्रति निधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा माधव नेपालले एमा ले सांसद नारदमुनि रानालाई गरेको व्यवहारबारे प्रश्न उठाएकी छिन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै सांसद चौधरी ले माधव नेपालले रानालाई बाहिर जानु भनेको घट्नाले समस्त थारु समुदायको अपमान भएको टिप्पणी गरिन् ।सम्बोधनको क्रममा उनले भनिन्,‘म थारुकी छोरी, ति’तो छु अनि स’त्यपनि छु ।
सभामुख महोदय, लोकतन्त्र भनेको के हो ? म लोकतन्त्र को परिभाषा खोज्दैछु । लोकतन्त्र भनेको के बोल्न नपा उने हो र ? फरक विचार राख्दैमा निस्केर जा भन्न मिल्छ ?
एउटा बराबर हैसियतको सांसदलाई निस्केर जा भन्ने ? त्यहाँ त सबैको एउटै है’सियत होईन र ? अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा अधिनायकवादी च’रित्र प्रदर्शन भयो ।
संविधानले दिएको मौलिक हक ह’नन भएको छ । वाक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आ’घात पुगेको छ । हामीले संघर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र यस्तो हुन सक्दैन् ।
१० गते समितिभित्र भएको घट्नालाई समस्त थारु समूदायको अपमान भएको रुपमा लिन सकिन्छ । नारदमुनि रानाको मात्रै होईन, जुन दृश्य समितिभित्र देखियो,
त्यो सदियौंदेखि शासकहरुले थारुमाथि शोषण गरेको झझल्को दिलायो, सभामुख महोदय, आगामी दिनमा यस्तो घ’ट्ना नदोहोरियोस, अब हामी थारु समूदायलाई यस्तो घट्ना स्विकार्य हुने छैन् ।’